ITuneslọ ahịa iTunes nwere ike igbapu batrị MacBook gị Esi m mac
Kpachara anya maka Storelọ Ahịa iTunes na oriri batrị na MacBook gị
Miguel Angel Juncos | | Apple, iTunes, Ngwa ndị ọzọ maka Mac, Ngwaahịa Apple, Mmemme Mac
Ọ bụrụ na anyị dabere na batrị nke MacBook anyị iji nwee ike ịrụ ọrụ ma ọ bụ ịmụ ihe ebe ọ bụ na anyị na-agagharị mgbe niile, mgbe ahụ obere ozi a nwere ike ịmasị gị. O nwere ike ịbụ na n'oge na-adịghị anya ma ọ bụ n'oge gara aga, anyị achọpụtala na ndụ batrị anyị na-adalata ngwa ngwa na-enweghị nkọwa doro anya, anyị nwere ike iche na ọ bụ ngwaike ngwaike, ihe doro anya nwere ike ịbụ eziokwu mana ọ bụghị n'ebughị ụzọ lelee na ngwanrọ niile arụnyere ejila batrị eme ihe n'ụzọ na-ezighị ezi.
Nke a bụ data onye ọrụ aha ya bụ Kirk McElhearn nwere ike wepụta, onye chọpụtara na Storelọ Ahịa iTunes na-erepịakwa ihe onwunwe n'ụzọ na-ezighi ezi na enweghị njikwa, inwe ike ịhapụ anyị na-enweghị batrị ngwa ngwa karịa ka anyị chere.
Kpọmkwem, Storelọ Ahịa iTunes na-eji oke pasent nke ike CPU gosi naanị peeji obibi ma pịgharịa site na slides na carousel n'elu nke ibe ahụ.
Karịsịa m mee ule ahụ na iMac ma dịka ị pụrụ ịhụ site na nseta ihuenyo ahụ, eziokwu dị mfe nke na-agba ọsọ iTunes yana isi Storelọ Ahịa peeji mepere emepe emeela. Iri CPU riri elu na 25,3%Agbanyeghị, ọ bụrụ na anyị tinye egwu na-enweghị imeghe ụlọ ahịa, oriri ga-adaba na 5%. Nke a gosipụtara n'ụzọ doro anya na enwere ngwanrọ ngwanrọ n'ihi na oriri adịchaghị na nkịtị.
Ihe kwesiri ibu bu na iTunes na coreaudiod (usoro a na-ejikwa odiyo nke iTunes na ngwa ndi ozo), rie ọnụ ihe dịka 7%, ma Storelọ Ahịa iTunes na-ewelite ọtụtụ eriri ndị ọzọ n'azụ nke na-ebu CPU na-agba nri, na-atụ anya na nyocha ndị ga-eme n'ọdịnihu Apple nwere ike idozi ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Ngwaahịa Apple » iTunes » Kpachara anya maka Storelọ Ahịa iTunes na oriri batrị na MacBook gị
Ọhụrụ Apple nwere ike iwepụta usoro ọdịyo dị elu